Nkebi nke 1: Ọ iMovie 11 nkwado AVCHD faịlụ?
Part 2: iMovie 10 nkwado AVCHD faịlụ?
Nkebi nke 3: Ga iMovie maka iPad nkwado kpọmkwem AVCHD ibubata?
Nkebi nke 4: Olee mbubata AVCHD faịlụ site na camcorder ka iMovie?
Part 5: Gịnị mere iMovie pụrụ imeghe m AVCHD faịlụ na na metụtara ngwọta
Nkebi nke 6:-atụ aro ngwaahịa
Part1: Ọ iMovie 11 nkwado AVCHD faịlụ?
The iMovie bụ otu nke kasị mma na omume na e mepụtara site Apple Inc. iji jide n'aka na needful a mere n'ime oge ọ bụla na onye ọrụ ọkọkpọhi chọrọ results n'ime chaachaa dị ka mma. Ọ na-na--ahụ kwuru na AVCHD faịlụ bụ ibu na arọ na-aba na ihe na-kacha mkpa bụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma dị ka ọ bụ otu n'ime ndị na-akwado formats mgbe ọ na-abịa iMovie na onye ọrụ nwere a usoro nwere ike ime ka n'aka na needful a mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na iMovie-akwado ndị na faịlụ na ọ bụ ikpe dị ka mma. The iMovie 11 ahụ dị ka iso jide n'aka na AVCHD format na-abụghị nanị na-akwado ma na-egwuri kasị mma na n'ụzọ. Olee ụdị AVCHD faịlụ na-akwado bụ ajụjụ nke nwere a dị mfe ma otu akara azịza ie niile AVCHD formats na yiri faịlụ na-akwado site na iMovie 11 na n'elu ihe nile obi abụọ onye ọrụ nwere ike inweta ihe kasị mma ọrụ na nke a site na-eme n'aka na Ọkpụkpọ na-abụghị nanị na-egwuri kamakwa zọpụta na na draịvụ ike iji iMovie technology.
Part2: Ọ iMovie 10 nkwado AVCHD faịlụ?
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ndị kasị elu AVCHD faịlụ ebre usoro na wee tupu iMovie 11 na dị nnọọ ka nke nọchiri ndị iMovie 10 nwekwara ike na-arụpụta ihe kasị mma na nke a site na-akpọ ndị AVCHD format enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu . Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na iMovie ndu na usoro ihe omume na-ibudatara na Apple Inc. ukara website iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị inwe ọhụrụ idetuo na kwesịkwara nweta nkwalite software omume iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na iMovie 10 na-aga n'ihu na-akwado AVCHD format enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na AVCHD format na-egwuri kpọmkwem na iji ọkpụkpọ na e agbakwunyere n'ime iMovie na ndị ya niile na nsụgharị na ọ bụrụ na a na-eme mgbe ahụ onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na AVCHD format nwere foto na videos na-adịghị na-egwuri kamakwa ebudatara.
Part3: Ga iMovie maka iPad nkwado kpọmkwem AVCHD ibubata?
Nkà na ụzụ nke iPad bụ otu nke kasị mma onye na-eme n'aka na format na-abụghị nanị na-akwado ma onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma na nke a site na-eme n'aka na AVCHD formats ndị ebudatara na ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla nke. E nwere dị iche iche njehie nke na-achọta na weebụ na mmekọrita a nke na ọ bụ-ahụ kwuru na importing AVCHD footages ka iPad bụghị a dị mfe ọrụ maka a novice ọrụ dị ka e nwere precautionary ihe na ga-agbasoriri iji jide n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na okwu a bụ nke kpebiri. N'ihu n'ihu na ọ bụ-ahụ kwuru na AVCHD 1080p, 50/60 na 720p 60 formats na-anaghị akwado site iPad na AVCHD formats na-ala nwere ike dị ma na-egwuri na ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. A na-agụnye 1080i, 50/60, 720p 24/25/30 and1080p 24/25/30 na-gụnyere dị ka ha na-adị mfe na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Part4: Olee mbubata AVCHD faịlụ site na camcorder ka iMovie?
Ọ bụkwa otu nke kasị mma ụzọ mee ka n'aka na AVCHD format na-agafere ka iMovie enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na na nke a onye ọrụ kwesịrị ikele ndị Apple Inc. maka egwu tech mpempe na e mepụtara na nke a site aha iMovie dị ka ọ bụghị nanị ekwurịta ihe iseokwu nke onye ọrụ kamakwa jide n'aka na ndabara omume na-eji mbubata arọ na nnukwu faịlụ dị ka mts, m2ts na AVCHD na ala na afọ ojuju na ọ bụ otu n'ime ndị na-Njirimara nke omume nke onye ọ bụla ọzọ nwere. Usoro a ga-soro na-kọwara dị ka n'okpuru:
1. The USB iyi ma ọ bụ nchọpụta a ga-tụgharịa na jidesie ngwaọrụ site na ebe mbubata na-eme ka iji jide n'aka na usoro-akpali onwe ya na ụzọ kasị mma:
2. The utilities na ndị ọzọ na omume dị otú ahụ dị ka iPhoto bụ-nkwarụ na-eme ka n'aka na iMovie nwere ike na-arụ ọrụ ezi. The ụzọ a ga-agbaso bụ iMovie> Njikwa> Bubata si Igwefoto> Bubata:
3. The nhọrọ gosiri na screenshot n'okpuru na-ka a chịkwaa dị ka kwa mkpa na ọchịchọ na-eme ka n'aka na AVCHD faịlụ na-e gosiri na dị:
4. The ibubata button bụ mgbe ahụ na-ahụ pịrị na-esote window rụchaa usoro n'ụzọ zuru ezu:
Part5: Gịnị iMovie pụrụ imeghe m AVCHD faịlụ na na metụtara ngwọta
Na-esonụ bụ ndepụta nke ihe ngwọta na nke a na-eme ka n'aka na needful na-eme na ala na afọ ojuju:
1. The format akakabarede
Ka e kọwara n'elu dị ka nke ọma na iMovie bụ ike igwu egwu ma na-egosipụta na ụmụ afọ AVCHD formats na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ bụrụ na nwa afọ format bụ n'ebe ahụ a convertor kwesịrị eji na-usoro mere na akara na chọrọ.
2. Format nkwado
Izugbe formats na iMovie 11 nkwado bụ .mp4, .mov, MPEG-2, AVCHD na DV & HDV na ọ bụrụ na-akwado usoro nke AVCHD ie 1080i, 50/60, 720p 24/25/30 and1080p 24/25 / 30 na-adịghị na-egwuri mgbe ahụ maa ọ bụ akporo nke ọkpụkpọ nke iMovie na ọ na-apụghị-egwu faịlụ. Ya mere, tupu eme n'aka na nke nfiksi na-etinyere ndepụta nke formats kwesịkwara nyochakwara ina ọrụ ahụ.
Part6:-atụ aro ngwaahịa (Wondershare Video Converter Ultimate)
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị uchu convertors iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na AVCHD faịlụ a ghọrọ ka iMovie akwado format enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere ngwaahịa na-ukwuu tụrụ aro na nkọwa nke ngwaahịa na-na interface dị nnọọ mfe ma converting faịlụ bụghị otu ihe iseokwu ọlị mgbe ọ na-abịa novice ọrụ dị ka ihe niile e kwuru n'ụzọ doro anya. The Complete Guide na na download njikọ e enịm ke http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html na onye ọrụ nwere ike ịga nke a URL ge na needful mere ASAP.
> Resource> iMovie> 4 ihe nwere mara banyere iMovie AVCHD